La Barbade : Inona No Nanjo an’i Akobi Tacuma Maloney? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2018 12:09 GMT
Araka ireo fijoroana vavolombelona rehetra, tovolahy mamiratra tao La Barbade (Antilles miteny anglisy) i Akobi Tacuma Maloney. Mpianatra 23 taona, rastafariàna resy lahatra, avy nahazo ny diplôma injeniera tamin'ny Anjerimanontolon'ny West Indies. Tany amin'ny lisea, niavaka ho toy ny mpianatra tsy manam-paharoa izy, ary ireo namany namaritra azy ho “Mpianatra azo antenainy indrindra ho tafita ao anatin'ny andiany”. Nahazo ny vatsim-pianarana avy tamin'ny governemanta tao Barbade izy, izay namatsy ireo fianarany tamin'ny anjerimanontolo ary izy no nofidian'ny Minisiteran'ny Fanovàna Ara-tsosialy ho iraka mba hisolo tena an'i Barbade mandritra ny fihaonana faha-5 iraisan'ireo minisitera misahana ny tanora sy ny politika sosialy any Amerika. Tepana mainty amin'ny haiady izy ary mpikabary nikoizana. Vao avy nisoratra anarana tamin'ny Fikambanan'ireo Injeniera Mpandraharaha tao Barbade izy ary nanaraka fianarana asa nandritra ny fahavaratra taminà ozinina iray mpanao simenitra. Toa niandry azy ny hoavy mamirapiratra. Saingy ny 17 jona 2008, niato avokoa izany rehetra izany. Tanatinà toe-draharaha izay mbola mila hazavaina, maty nandritra ny fihaonany tamin'ny polisy tao Barbade i Maloney. Araka ny fanambaràn'ny polisy [amin'ny fiteny angilisy], tamin'ny 5 ora sy 30 minitra maraina tamin'io andro io, namaly ny antso mikasika ny fitorohana famatsiana rongony tao Cove Bay ny polisy, any akaikin'ny tendrony avaratry ny nosy Barbade. Hitan'ireo polisy noho izany i Maloney teo akaikin'ny tendrona hantsambato mitatao amin'ny ranomasina. Nanatona azy izy ireo mba hanontany.
“Ireo singa voalohany mikasika ny fanadihadiana dia mampiseho fa nihazakazaka tampoka i Maloney mba hitsoraka avy eny ambony hantsambato, ary nidaraboka tamin'ireo vato. Fotoana vitsy monja taorian'izay, nentin'ireo onja teny amin'ny torapasika ny vatany” hoy ny fanambaràn'ny manampahefana miandraikitra ny serasera, ny inspektera Barry Hunte.
Taty aoriana, toy ny nilaza ny mpanampy ny mpampanoa lalàna hoe “reraka ara-tsaina” [amin'ny fiteny angilisy] i Maloney ny andro nitrangan'ny loza. Araka ny voalazan'ny talen'ny polisy misahana ny ady heloka, nahitàna taratasy iray tao anaty diariny manokana, manaporofo fa mikasa ny hamarana ny androny izy. Saingy avy hatrany dia tsy ninoan'ny fianakaviany io voalaza io. Mamaly ny reniny fa [amin'ny fiteny angilisy], raha mbola manamafy ny polisy hoe nianjera tamin'ireo vato ny zanany lahy, misy ratra mazava tsara ao ambadiky ny lohany. Fanampin'izay, noheverina ho nitsambina avy eny ambony hantsana i Maloney niaraka tamin'ny kitapo fibabiny. Adiny valo no nijanonan'ny vatany tao anaty rano vao nalaina. Na izany aza, rehefa nomena an-dreniny ny kitapony, tsy nisy simban'ny rano ny tao anatiny [amin'ny fiteny angilisy].
Roa andro latsaka taorian'ny loza, nanokatra blaogy AfriKa CRY BLOOD [amin'ny fiteny angilisy] ny Conseil lchirouganaim ho an'ny Fandrosoan'ny Rastafari (ICAR) [amin'ny fiteny angilisy], fikambanana iray miaro ny rastafari ao Barbade, mba “hampahafantarana, hiarovana ny fahatsiarovna ary hiarovana ny Ras Tacuma.” Nanomboka nangonin'ny ICAR ireo singa rehetra mety hahafahana manaporofo ny hadisoan'ny polisy, mandà an'ireo fanambaràna nataon'ny polisy [amin'ny fiteny angilisy] izay nilaza hoe voasaringotra amina fanondranana rongony antsokosoko i Maloney ary takian-dry zareo ny hanaovana fitsaràna haingana mikasika ny fahafatesany. Mandrakotra ny fihetsiketsehana natao tany Bridgetown renivohitr'i Barbade ilay blaogy, ary ireo fanontaniana amin'ny Parlemantera napetrak'ireo solombavambahoaka mikasika an'io raharaha io. Namaly ny polisy fa an-dalana ny fanadihadiana, saingy misalasala ireo blaogera ao Barbade.
“Tsy hisy fanadihadiana ampahibemaso mikasika an'io fahafatesana io” hoy ny Barbados Free Press manoratra [amin'ny fiteny angilisy]. Tsy hisy fitsaràna ampahibemaso mba hamaritana ny manodidina ny fahafatesany nefa izy “niaraka” tamin'ny polisin'i Barbade. Tsikelikely eny, hamela ny raharaha hilentika moramora any amin'ny fanadinoana ireo media eo an-toerana, ary ireo olona hiteny hoe “Eny, inoako fa nisy tokoa ny fanadihadiana, izay nifarana tamina… “, SAINGY HO LAINGA IZANY”.
Mampatsiahy tranga mitovy tamin'io amin'ireo mpamaky azy ihany koa ny Barbados free press, tranga izay nahafatesana lehilahy iray fotoana vitsy monja taorian'ny nihaonany tamin'ny polisy.
Etsy andaniny, i Barbados Underground [amin'ny fiteny anglisy] namoaka manontolo ny lahatsoratra misy ny fanambaràna nataon'ny antoko politika iray, ny People's Democratic Congress (Kaongresy Demaokratikan'ny Vahoaka).
… izahay ato amin'ny PDC dia mangataka fa TSY HOE FOTSINY hitondra fanazavàna maimaika mikasika an'ireo trangam-pahafatesany ny mpitsabo ara-pitsaràna fa KOA hanome alalàna ireo sampanasa ao aminy hanao fanadihadiana tsy miankina sy tsy mitanila mikasika an'io tranga mampalahelo io koa ny mpampanoa lalàna.
“Mampivarahontsana ahy ity raharaha ity” hoy ny blaogera Caribbean Lionesse manoratra [amin'ny fiteny angilisy]:
Nitovy tamiko i Akobi, Tanora, maanampahaizana, manana mari-pahaizana avy amin'ny anjerimanontolon'i West Indies, be faniriana, manana asa tsara, sy ireo randram-bolony rasta. Afaka hanantena fa ny fiarahamonintsika dia efa nahavita fandrosoana sahaza mba handraisana ho anaty kajikajy ireo fahombiazantsika…
Omeny ny rohy mankany amin'ny vovonana fifampiresahana Rastafari Speaks [amin'ny fiteny anglisy], izay anoloran'ilay mpampiasa aterineto Sis Ali hevitra fa voa tamin'ny resaka “profilage” (fanamarihana: fanamboarana endrika hitadiavana izay meloka) nataon'ny polisy i Maloney: “nisy olona nahita an'i Rasta teny ambony teny ary niantso ny polisy”. Mbola miandry hatrany ny valinteny amin'ireo fanontaniana ireo ny fianakavian'i Maloney sy ny Vondrom-piarahamonina Rastafari ao Barbade. Nanomana fihetsiketsehana iray hafa ny ICAR tamin'ny zoma 1 aogositra 2008 – andro fankalazana ny fandravàna ny fanandevozana tany amin'ireo Antilles miteny anglisy – ary nandefa fanangonan-tsonia iray tamin'ny tambajotra mba hitakiana ny rariny.